Shaw Theatre မှာ 2012 Doomsday ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံမှာတင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ အစ်မကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ ၀ိုင်း အပါအ၀င် အားလုံးပေါင်း ၁၇ယောက် အုပ်စုလိုက် သွားကြည့်ကြတယ်။ အဲ့ဒီကားကတော့ သာမန်ကားတွေနဲ့ မတူတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။
တစ်နေ့မှာ စာရေးဆရာ Jackson Curtis ဟာ Yellow Stone Park ဆိုတဲ့နေရာကို အားလပ်ရက်တစ်နေ့မှာ သူကွာရှင်းပြီးတဲ့ ဇနီးရဲ့ သမီးနဲ့ သား၂ယောက်ကို ခေါ်ဆောင်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်အချိန် သူတို့ ဇနီးမောင်နှံသွားခဲ့တုန်းကလောက် အဲ့ဒီနေရာက ပျော်စရာ မကောင်းတော့တာ အမှန်ပါ။ ကန်ရေပြင်တွေလည်း ရေတွေ ခြောက်ခန်းကုန်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီပန်းခြံနေရာကို တားမြစ်နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြသေးတယ်။ အဲ့ဒီ အနီးမှာ နေတဲ့ ပင်လယ် ဓါးမြဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Charle နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ Charle ကပြောတယ် " သဘာဝလောကကြီးရဲ့ သယံဇာတတွေဟာ သားရဲတိရစ္ဆာန်တွေကြောင့်၊ လူတွေရဲ့လောဘရမ္မက်တွေကြောင့် ပျက်စီးတော့မယ်။ ကမ္ဘာမြေပြင်လည်း ငြိမ်သက်နေရာကနေ ပြိုကွဲပျက်စီးလိမ့်မယ်၊ လူသားတွေအားလုံးလည်း မမျှော်လင့်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်။ တချို့ နိုင်ငံတွေကဆို အကြောင်းသိလို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာရင် ခိုအောင်းလို့ရမယ့် အာကာသယာဉ်တွေတောင် လျှို့ဝှက်ပြီး ဆောက်နေကြပြီ " ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်သလို ပြောလာပါတယ်။ Jackson က သူဟာ အရူးတစ်ယောက်ပဲလို့ ယူဆပြီး ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲ ထွက်ခွါလာခဲ့တယ်။
ဒုတိယမြောက်နေ့မှာ သဘာဝဘေးအန္တရယ်ကျရောက်လာပါတော့တယ်။ မြေကြီးတွေ အက်ကွဲ၊ ငလျင်တွေလှုပ်၊ အဆောက်အဦတွေ၊ တံတားတွေ ပြိုကျ၊ ကောင်းကင်ကနေ ဥက္ကာပျံတွေကလည်း တဖွဲဖွဲကျလာရော။ မျက်စိရှေ့မှာတင် လှပတဲ့ အိမ်တွေ၊ အဆောက်အဦတွေဟာ မြေကြီးထဲ နစ်ဝင် ဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ ပင်လယ်ရေတွေလည်း တလိမ့်လိမ့်တက်လာပြီး ရှိသမျှအရာအားလုံးကို ဖုံးလွှမ်းတိုက်စားသွားတော့တယ်။ ကမ္ဘာ့ရဲ့ နေရာအသီးသီးမှာလည်း အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ပျက်စီးနေတာတွေရောပေါ့။ Jackson နဲ့ သူမိသားစုဝင်တွေလည်း အဲ့ဒီ ဘေးရန်တွေကနေ သီသီလေး လွတ်မြောက်ခဲ့ရတာတွေကို ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ရိုက်ကူးထားသေးတယ်။ ကားနဲ့ လွတ်အောင်ပြေးလို့မရတော့တဲ့အဆုံး လေယာဉ်နဲ့လွတ်အောင်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံးဘယ်ဘက်ကို ထွက်ပြေးရမလဲ မသိတဲ့အချိန် Charle ပြောဖူးခဲ့တဲ့ အာကာသယာဉ်တွေရှိတဲ့ တည်နေရာ မြေပုံဆိုတာကို သွားသတိရလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ခုတည်းသောအသက်ရှင်သန်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတဲ့နေရာ ကမ္ဘာ့အရှေ့ဘက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်ကို ရောက်သွားခဲ့ပါရော...
နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ အာကာသယာဉ်တွေ ရှိတဲ့ နေရာကို ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ပဲ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဒီယာဉ်တွေအကြောင်းကို သိလို့ ရောက်လာကြတဲ့ ဒုက္ခသည် လူအုပ်တွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ အဲ့ဒီအာကာသယာဉ်အတွင်းထဲမှာတော့ နိုင်ငံ အသီးသီးက သမ္မတတွေ၊ အာဏာရှင်တွေ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ နာမည်ကြီးကုန်သည် တွေ ရောက်နှင့်နေတာပေါ့။ ပင်လယ်ဘက်က လှိုင်းလုံးတွေက တလိမ့်လိမ့်တက်လာနေပြီ ယာဉ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့ ယာဉ်ဖြစ်လာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ တခြားသော တိုင်းပြည်အသီးသီးက သာမန် ပြည်သူလူထုတွေက အထဲဝင်ခွင့်တောင်းနေသံတွေနဲ့........လှိုင်းလုံးကြီးတွေ နီးကပ်လာဖို့ ၁၅မိနစ်လောက်အလိုမှာ အာဏာရှင်တွေက အကြိတ်အနယ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ဘယ်သူတွေကဖြစ် အသက်ရှင်ရမယ်၊ ဘယ်သူတွေကဖြစ် သေဆုံးကြရမယ် ဆိုပြီး ခွဲခြားထားတာမရှိဘူး။ လူသားတွေဟာ အသက်ကြီး၊ငယ်၊လတ် မရွေး၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး အားလုံးဟာ တစ်တန်းစားတည်းပါပဲ။ လူသားအားလုံး အသက်ရှင်သန်ကြရမယ့် အခွင့်အရေး ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အပြင်ဘက်မှာ ကျန်ရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေ အားလုံးကို ယာဉ်တွေထဲ ၀င်ခွင့်ပေးလိုက်တယ် ..ယာဉ်ထဲမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတိုင်း နောင်အနာဂတ်မှာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွါးဖို့နဲ့ ကမ္ဘာကြီးပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် တာဝန်ကိုယ်စီဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ အစဉ်ကိန်းအောင်းစွာကျန်ရှိရင်း.....
ဆက်လက်ပြီး ဇာတ်လမ်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ချင်သူများအတွက် ဒီလင့် ကနေ တဆင့် ဒေါင်းပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတည်း ကိုတောသားလေး တက်ဂ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာပျက်တော့မယ်ဆိုရင် ဆိုတဲ့ တက်ပို့စ်ပါ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
၀ိုင်းရဲ့ မိသားစုနဲ့၊ အချစ်ဆုံး အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတူရှိနေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေက အဲ့ဒီအချိန်ထိ ကိုယ့်ဘေးမှာ အမြဲတမ်း ရှိပေးနိုင်ပါ့မလားမသိဘူး။ ကိုယ်တိုင်တောင် ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေမှန်းတောင် မသိသေးဘူးလေ။
သေမယ့်အတူတူ ဘာကို မှ မခံစားချင်တော့ဘူး ၀င်သက်ထွက်သက်မှတ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း နေလိုက်မယ်။
လူတိုင်း တစ်နေ့မှာ သေခြင်းတရားနဲ့ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရမှာဆိုတော့ အခုလို အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ တတ်နိုင်သလောက် ဓမ္မဒါန ကုသိုလ် အလှူတွေ လုပ်နေမယ်။
သေတော့မယ့်အချိန်ထိ လူတွေဟာ အတ္တတွေ၊ ကိလေသာတွေရှိတုန်းပဲလေ။ ကိုယ့်အသက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သူများအသက်ကို စတေးလိုက်ရမှ အသက်ရှင်သန်ရမယ် ဆိုတဲ့ လူ့ အတ္တသမားတွေအတွက် ၀မ်းနည်းမိတယ်။
ပြီးတော့ လူ့လောကကြီးအတွက် ဘာတစ်ခုမှ အကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်သေး အတွက် နောင်တရနေမိတယ်။ လူ့ဘ၀မှာ ဘာမှမဖြစ်သေး မလုပ်ရသေးခင် သေရတော့မယ်ဆိုတာကိုတွေးပြီး ၀မ်းနည်းစွာခံစားမိပါတယ်။
ဒုက္ခဝေဒနာတွေ ခံစားရပြီးမှ မသေမရှင် ဖြစ်နေမှာကို။ တကယ်လို့ သေသွားပြီးရင်လည်း သာသနာမရှိတဲ့ နေရာ၊ အယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့နေရာမျိုးတွေ ရောက်သွားရင်ရော.......
အနားမှာတော့ ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးတော့ ရှိချင်တယ် မသေခင် အားလုံးကို နှုတ်ဆက်စကား ပြောသွားချင်တယ် ( ကိုယ်ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ဝေးကွာနေရတဲ့အခါ သူတို့ကို အလေးထားခဲ့ကြောင်း ချစ်ခဲ့ကြောင်းကိုတော့ သိစေချင်တယ်) အခွင့်အရေး ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ပါ...... ရုပ်ရှင်ထဲကလို အဖိုးကြီးက သူ့မိသားစုနဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ စကားပြောဖို့ အခွင့်အရေး မရလိုက်လို့လေ
ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မလွတ်နိုင်သေးတာသူများအတွက်ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးရေးမိမှာ မဟုတ်လို့ပါ။
ဘ၀မှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့သမျှ ငွေကြေး၊ ရာထူး၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ၊ ဂုဏ်တွေဟာ အခုတော့ ဘာတစ်ခုမှကိုယ့်နောက်ပါတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလေ..... အဲ့ဒီတော့ ဘာကြောင့်များ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတွေနဲ့ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် မနာလို ၀န်တိုပြီး သူများအပေါ် မတရားတာတွေ လုပ်မိတော့မှာလဲ
ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကြီးမှာ ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေ နာကြားခွင့်ရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
မိသားစုအတွက် တတ်စွမ်းတဲ့ဘက်က ကူညီခွင့် ပေးဆပ်ခွင့်ရခဲ့လို့ပါပဲ။ သာသနာသက္ကရာဇ်မှာ တရားတော်မြတ်တွေ နာကြားခွင့်၊ တတ်နိုင်သလောက် ဓမ္မဒါနအလှူတွေ လုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
ဒီနေ့ မသေရင် မနက်ဖြန် သေရမယ်။ မနက်ဖြန်မသေရင် သန်ဘက်ခါ သေရမယ်။ တစ်နေ့နေ့တော့ သေဆုံးမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာမှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်လို့ မသေခင်မှာ လူတိုင်းအပေါ် စိတ်ထားဖြူစင်စွာထားပြီး တရားဓမ္မအလုပ်တွေကို အချိန်ရရင် ရသလို ကြိုးပမ်းအားထုတ်နိုင်သူဖြစ်ချင်ပါတယ်
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာဓိက ရေးသားတဲ့ မသေခင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး ဖတ်မိပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဖြန့်ဝေပေးလိုက်ပါရစေ...
လူသားတွေရဲ့ ဘ၀မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးအရာဟာ သေခြင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သေခြင်းတရားဟာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ ဂုဏ်ရှိဂုဏ်မဲ့မရွေး၊ ဥာဏ်နု ဥာဏ်ရင့်မရွေး အသက်ကြီးငယ်မရွေး လူသားအားလုံးနဲ့ တပြေးညီ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဘ၀အရည်အသွေးကို ထိပ်တန်းအကျဆုံး မြင့်တင်ပေးမယ့် ဘ၀မေးခွန်းတွေထဲမှာ အချက်အချာအကျဆုံး မေးခွန်းကတော့ မသေခင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ မဟာ မေးခွန်းကြီးပါပဲ။ ကိုယ်တကယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မသေခင် တခဏ ဘ၀တိုလေးကို တလေးတစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ အလုပ်ပိုနဲ့ အလုပ်လို၊ အကာအလုပ်နဲ့ အနှစ်အလုပ်ကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့၊ အလုပ်သင့် အလုပ်ထိုက်ဆုံး အလုပ်တွေကို အရည်အသွေး ပြည့်မီအောင် အပြီး အဆုံး ပေါက်မြောက်အောင် အားထုတ်ဖို့ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးခါနီးကာလမှာ နှစ်ဟောင်းမှာ ငါမသေခဲ့လို့ နှစ်သစ်ကို ရောက်တာနဲ့ ငါ အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီ သေဖို့တစ်နှစ်ပိုနီးလာပြီ။ နှစ်သစ်ရဲ့ ရက်စွဲ တစ်ခုခုမှာ ငါသေချင်သေသွားနိုင်တယ်။ နှစ်ဟောင်းမှာ သေခြင်းတရားကို လွန်မြောက်ခဲ့ပေမယ့် နှစ်သစ်မှာ လွန်မြောက်ချင်မှ လွန်မြောက်မယ် ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်၊ လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ မသေခင်ကာလမှာပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပါ သေပြီးရင် ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတော့ပါဘူး
သေလွန်ခါနီးအချိန်မှာ အာရုံဆိုး၊ နိမိတ်ဆိုးတွေ ထင်မြင်မလာဖို့အတွက် မသေခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အသေကြီးကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အသေလေးနဲ့ လေ့ကျင့်ထားရပါမယ်။ အသေကြီးဆိုတာ ဘ၀တစ်ခုလုံးရဲ့ နောက်ဆုံး အပြီးအပြတ် သေလွန်ခြင်းကို ပြောတာပါ ။ အသေလေးဆိုတာကတော့ ဘ၀တစ်နေ့တာရဲ့ နောက်ဆုံး အိပ်စက်ခြင်းကို ပြောတာပါ။ ညအိပ်စက်တာဟာ အသေလေးနဲ့ သေတာပါ။ ညအိပ်တော့မယ်လို့ မျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့ ကုသိုလ်အာရုံတွေ ထင်မြင်နေရပါမယ်။ ဒါနအာရုံ၊ သီလအာရုံ၊ သမထအာရုံ၊ ၀ိပဿနာ အာရုံလို့ လေးမျိုးရှိပါတယ်။
ဒါန အာရုံ အနေနဲ့ ဒီနေ့ ဒီအချိန်အထိ ဘ၀တစ်သက်တာမှာ ပြုခဲ့တဲ့ ဒါနကောင်းမှုတွေထဲက ကိုယ် အနှစ်သက်ဆုံး၊ ကိုယ်ပီတိအဖြစ်ဆုံး ဒါနကောင်းမှု တစ်ခုခုကို ခုလောလောဆယ် လှူနေရသလို အာရုံထင်မြင်ပြီး ၀မ်းမြောက်ပီတိ ဖြစ်နေရပါမယ်။ ညအိပ်ရာ ၀င်ခါနီးတိုင်း ဘုရားသောက်တော်ရေ အသစ်လဲတဲ့ အကျင့် စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ပေးပါ။ အိပ်ခါနီး အနီးကပ်ဆုံး ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်လို့ အာရုံယူရတာ အလွန်လွယ်ပါတယ်။ အေးချမ်းမှုနဲ့ တစ်နေ့တာကို အဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့ အတွက် ဘ၀တလျှောက်လုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီး အေးချမ်းရပါလိမ့်မယ်။
သီလအာရုံ အနေနဲ့ လူဝတ်ကြောင်တိုင်း မစောင့်မဖြစ် စောင့်ရမယ့် ငါးပါးသီလကို ဆင်ခြင်ရပါမယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးမှာ ငါးပါးသီလကို အသစ်ခံယူဆောက်တည်ပါ။ ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီး မကျိုးပေါက်ပါစေနဲ့။ အိပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျိုးပေါက်စရာမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် အခုနောက်ဆုံး ငါးပါးသီလ ယူပြီးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ငါးပါးသီလ လုံခြုံနေပြီလို့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သမထအာရုံ အနေနဲ့ ကိုယ်အနှစ်သက်ဆုံး၊ အကြည်ညိုဆုံး ဘုရားဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကို ပွါးများပါ။ နောက်တစ်ခု သမထအနေနဲ့ မေတ္တာဘာဝနာ ပွါးများနေရပါမယ်။ သတ္တ၀ါ အားလုံး ချမ်းသာကြပါစေလို့ အနည်းဆုံး ၃ခေါက်လောက် ပွါးများရပါမယ်။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ကိုယ်အားသန်ရာ မေတ္တာပွါးနည်းတွေနဲ့ မေတ္တာပွါးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ၀ိပဿနာအာရုံ အနေနဲ့ နှာသီးဝ လေထိရာအရပ်မှာ သတိကပ်ပြီး လေ၀င်ရင် ၀င်တယ် လေထွက်ရင် ထွက်တယ်ရှုမှတ်ပြီးနေပါ။ ၀င်လေထွက်လေ ရှုမှတ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး အိပ်ဆေးပါပဲ။
မသေခင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံး၊ ပဓါနအကျဆုံးကတော့ ကိလေသာခေါင်းပါးရေးအလုပ်၊ အမြစ်ပြတ်ရေးအလုပ်ပါပဲ။ ကိလေသာ ခေါင်းပါးလာတာနဲ့အမျှ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာတွေလည်း ရှောင်ကြဉ်နိုင်လာပါတယ်။ လုပ်သင့်တာအားလုံး အကြွင်းမဲ့ဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ အကြွင်းမဲ့ဘ၀လွတ်မြောက်မှုကို ရပါပြီ။ သေခြင်းတရားက အပြီးတိုင် လွတ်မြောက်ပါပြီ။ ဒုက္ခဆိုးတွေက ထာဝရလွတ်မြောက်ပြီး အနှိုင်းမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာ အကြွင်းမဲ့ ပျော်စံနိုင်ပါပြီ။
အရပ်ဆယ်မျက်နှာ၌ရှိကြသော နတ်လူသတ္တ၀ါအားလုံး ဘေးရန်ရောဂါ ကင်းစင်ကွာ၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
Posted by Waing at 11/23/2009 12:49:00 PM
Labels: Movie, Religious, Tag
၀ိုင်းရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကို တင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတိုင်းက ကမ္ဘာမပျက်လည်းပဲ သေကြရမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ မသခင် ဖြည့်ဆည်းရမည့် အရာများအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒါနဲ့ အရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀ိုင်းလာပေးသွားတဲ့ Link ကိုလည်း အစ်မဆီက ၀င်လို့မရတာ ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးပဲနော့်။
ညီမရေ ဇာတ်ကားကောင်းလေးကို စာအညွှန်လေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမိစွားပါတယ်။ သေခါနီးရင် ဘာတွေလုပ်ချင်လည်းဆိုတဲ့ ညီမအတွေးလေးတွေကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်ဗျာ။
စိတ်ဝင်တစားဖတ်သွားပါတယ် .. တန်ဖိုးရှိတာတွေ စုထားသလိုပဲ ..း))
၀ိုင်းရဲ့ကမ္ဘာပျက်ခံစားချက်လေးတွေရော . . . အရှင် ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ မသေခင် ဘာလုပ်ကြမလည်း လေးပါလာ
ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ . . .
ဒါပေမဲ့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့က တရုတ်စာမတတ်တော့ ခပ်ခက်ခက်ရယ်။ ဘယ်ဟာက ဒေါင်းလုပ် လုပ်တဲ့ ဘော့တန်မှန်းတော့ ခက်သား။
မဖတ်ရသေးတဲ့စာတွေ အများကြီး တ၀ကြီးလာဖတ်သွားတယ်ဗျို့......
မသေခင်ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့ စာပိုဒ်လေး တန်ဘိုးရှတယ်
မဖတ်ဖူးဘူး.. ခုမှဖတ်ဖူးတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကလဲ ကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် သိပ်နားမလည်ဘူးလေ.. ဟီးဟီး
နည်းပညာတွေနဲ့ ဗဟုသုတစာပေတွေကို များများ တင်ပြနိုင်ပါစေလို့ တိုက်တွမ်းအားပေးလိုက်ပါတယ်..